I-Moerkey ijika amaqhosha amadala kunye neengqekembe zibe bubugcisa obuhanjisiweyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMichael aka Imoji ngumzobi waseHorsham, eVictoria (Australia). Ingcibi enobuchule idala Iibhola ezizodwa ezenziwe ngesandla, izitya y imifanekiso eqingqiweyo enezitshixo ezilahliweyo neengqekembe; Kunye ne iityhubhu zobhedu eziphinde zasebenza.
Kuluhlu esikubonisa lona kamva, UMichael ugoba kwaye ajije iintsimbi ezizodwa kunye neengqekembe ukwenza izinto ezintle. Into nganye yenziwe ngokwesiko labo Ivenkile ye-Etsy. Unokulandela uMichael Facebook. Emva koko sikushiya i vidiyo.
Amaqhosha kunye neengqekembe, nditsho nokuhamba okufumba indlu yakho kungaguqulwa kubugcisa obuhle obunobuchule obuncinci kunye nohlobo olufanelekileyo lolwazi lobuchwephesha. Michael o Imoji, igcisa laseOstreliya njengoko besikhe sathetha nawe ngaphambili, yenza kanye loo nto, eguqula izitshixo neengqekembe zemali kwiibhotile ezilahliweyo izibane zesibane nabanye Imifanekiso eqingqiweyo eyenziwe ngentsimbi entle.
Xa kwakufuneka icoca ishedi yam, ndadibana nobhedu oluwohlokileyo endalugcina ndinombono endandinawo engqondweni. Ndiyinqumle ibe yimisesane ndaza ndaqala ukwenza amabala, njengoko uMichael echaza kwivenkile yakhe yase-Etsy. Imisebenzi embalwa yokuqala yayiyingozi, kodwa nje ukuba ndisebenze obu buchule baba nobuchule.
Sele ndiza kuba yindawo yokukhangela ejikeleze mna kuzo zonke izitshixo zobhedu ezindala kunye neengcingo, ezingasafunekiyo, kwaye ndibeka bonke ubuchule kunye nabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-Moerkey ijika amaqhosha amadala kunye neengqekembe kubugcisa obonyuswe ngebhayisikile
Umculi we-Makeup uTal Peleg wenza imiboniso bhanyabhanya evela kwiimuvi nakwiincwadi kwiinkophe zakhe